Xulashadii Kuraasta Aqalka sare ee Galmudug oo soo idlaatay | KEYDMEDIA ONLINE
Xulashadii Kuraasta Aqalka sare ee Galmudug oo soo idlaatay
Kulan Xulasho ah, oo loo ekeysiiyay madal doorasho, oo lagu soo saaray Lix Sanatar oo ka mid noqonaya Aqalka Sare, ayaa dhawaan ku soo gabagaboobay Dhuusamareeb.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Xulasho Lix kursi oo ka mid ah Siddeeda kursi, ee Maamulka Galmudug uu ku leeyahay Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Fadaraalka Soomaaliya, oo maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Galmudug ayaa soo gabagaboowday.
Sida ay hore u sheegtay, Keydmedia Online, Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor, ayaa kuraasta u xiray Lixda Sanatar ee ku soo baxday, waxaana dhamaantood lagula qoray dad ehelkooda ah, taas oo sababtay in ay is casilaan musharixiiintii maqaar saarka ahaa.
Lixda Kursi, ee maanta ka soo baxay magaalada Dhuusamareeb, ayaa kala ah;
Cabdi Axmed Dhuxulow (Dhagdheer) - Murusade.
Yuusuf Geelle Ugaas (Dhagay) - Duduble.
Saciid Siyaad Shirwac – HG- Saleebaan.
Samsam Daahir Maxamuud – Abgaal, Waceysle.
Cabdixakiim Macallin Axmed - HG-Cayr.
Duniyo Maxamed Cali – Dir.